इण्डोप्यासिफिक रणनीति र एमसीसी - Ujyaalo Nepal
By ujyaalo	 On २९ पुष २०७६, मंगलवार १४:०४ 61
एमसीसी आईपीएस रणनीतिको अङ्ग होइन भनेर प्रमाणित गर्नको लागि सरकारले जुन तर्कको सबैभन्दा बढी सहायता दिएको छ, त्यो यो हो ः नेपाल र अमेरिकाको बीचमा एमसीसीसम्बन्धी सम्झौताको हस्ताक्षर सेप्टेम्बर, २०१७ मा भएको थियो भने आईपीएस रणनीति नोभेम्बर, २०१७ मा अस्तित्वमा आएको थियो । त्यसको आधारमा सरकारले, एमसीसी आईपीएसको रणनीतिको अङ्ग नभएको कुरा प्रमाणित गर्नेछ, त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउन जोड दिइरहेको छ ।
तर, नेपाल र अमेरिकाका बीचमा एमसीसीबारे हस्ताक्षर गर्दा आईपीएस रणनीति अस्तित्वमा नआइसकेको भनिए पनि त्यो कारणले एमसीसी इण्डोप्यासिफिसक रणनीतिको अङ्ग नभएको प्रमाणित हुँदैन । त्यसलाई (एमसीसीलाई) आइृपीएसको रणनीतिक अङ्ग बनाउने वा नबनाउने ? अघिपछि कहिले बनाउने ? त्यो निर्णय गर्ने काम अमेरिकाको हो । स्वयं अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा नै (एमसीसीलाई) आईपीएस रणनीतिको अङ्ग बताइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको प्रयत्नले उनीहरूले जसरी पनि त्यसलाई पारित गराउन गरेको प्रयत्नलाई नै बताउँछ । सरकारले जुन प्रकारको प्रयत्न गरिरहेको छ वा जुन तर्कको सहायता लिएर त्यसलाई पारित गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो वास्तवमा सरकारले अमेरिकापरस्त चरित्रमाथि पर्दा हाल्ने प्रयत्न हो । अर्को शब्दमा त्यो नेपाली जनतासितको धोका पनि हो ।
अमेरिकी राजदुतावासले एमसीसी आईपीएस रणनीतिको नै अङ्ग भएको कुरा बताउनको लागि जुन समय छानेको छ, त्यो पनि कम महत्वपूर्ण छैन । नेकपाको नेतृत्व पंक्तिमा एमसीसी आईपीएसबारे चर्को बहस भइरहेको थियो । उनीहरूले एमसीसी आईपीएस रणनीतिक अङ्ग हो वा होइन ? त्यो बुझेपछि नै त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने समझदारी गरेका थिए । त्यही बेला नै अमेरिकी दुतावासले त्यो आईपीएस रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा बाहिर ल्यायो । यो वास्तवमा नेकपालाई अमेरिकाले दिएको एउटा झापड नै थियो । त्यसले नेकपालाई यो चुनौती दिएको थियो ः त्यो अमेरिकाको आईपीएस रणनीतिको अङ्ग भए पनि नेपाल वा नेपालको संसदले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । सायद उनीहरू (अमेरिका)यो कुरामा पूरा विस्वस्त थिए कि त्यो कुरा प्रष्ट भइसकेपछि पनि नेकपाले त्यसलाई स्वीकार नै गर्नेछ ।
तर, सही कुरा यो हुन्थ्यो कि अमेरिकाले त्यो कुरा स्पष्ट गरिसकेपछि, एमसीसी आईपीएस रणनीतिको नै अङ्ग हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिसकेपछि, नेकपा वा त्यसको सरकारले त्यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दथ्यो । तर, उनीहरूले त्यसो गर्ने नैतिक आँट गर्न सकेनन् । त्यो उनीहरूको गम्भीर प्रकारको राजनीतिक गल्ती हो । त्यसले उनीहरूलाई कहाँ पुर्‍याउने छ ? आउने दिनहरूले त्यो कुरा स्पष्ट गर्दै जानेछन् । सायद उनीहरूले यो सोचेर एमसीसीलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाउँदै छन् कि अमेरिकाले अगाडि सारेको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने हो भने उनीहरूको सरकारको अस्तित्वलाई नै खतरा पैदा हुनेछ ।
तर जस्तै कि उनीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पणको नीति अपनाउँदै गइरहेकका छन्, त्यसले पनि उनीहरूलाई लामो समयसम्म बचाइराख्ने छैन । कुनै पनि साम्राज्यवादी देशको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर होइन, देश, जनता वा राष्ट्रियताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर नै कसैले आफ्नो रक्षा गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । आज उनीहरूले त्यो कुरा नबुझे सायद इतिहासले त्यो कुराको उनीहरूलाई शिक्षा दिनेछ ।
प्रकाशित: २९ पुष २०७६, मंगलवार १४:०४
बौद्ध सम्प्रदायलाई दलाई लामाकरण गर्ने खतरनाक खेल,गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा…
तयारीलाई तिब्रता दिन, बेपत्ताहरुको खोजी र अबरुद्ध सडक सञ्चालनका लागि सरकारको…